Minoxidil maka ntutu maka ndị inyom - maka ibu, site na ntutu isi, analogs
Minoxidil maka ntutu - a na-agwọta №1 maka nnaputa nke ntutu
Alopecia bụ nsogbu siri ike. Na ọgwụgwọ ya, Minoxidil dị irè maka ntutu. Ọgwụ a na-achọ ma ndị ikom ma ndị inyom. Nleta nke ngwá ọrụ a bụ n'ihi nnukwu arụmọrụ ya. Ọ bụghị nanị na-enyere aka ịnagide alopecia, kamakwa ọ na-akpali ọganihu nke ntutu ọhụrụ.
Minoxidil - gini ka ọ bụ?
N'ime obi a na-agwọta otu ihe ahụ yiri mkpuchi nke ndò dị ọcha. Ọ dị mfe soluble na mmiri, ethanol na propylene glycol. Ná mmalite, e mepụtara ọgwụ a maka ọgwụgwọ ọnya afo. E mechakwara jiri ya belata ọbara mgbali elu. Ndị dọkịta chọpụtara na ọgwụ a nwere otu mmetụta dị mma. Ọ na-eme ka ntutu na-eto eto ma gbochie ọnwụ ha.
Ndị ọkachamara na-amaghị ikike a nke ọgwụ ọjọọ. Ha malitere iji nlezianya na-amụ ihe Minoxidil bụ na ihe mmetụta ya na isi ịnụ bụ. N'oge a na-anwale, a na-eji ọgwụ ahụ eme ihe n'èzí n'akụkụ ụfọdụ nke akụkụ ahụ ndị ahụ. Ihe esi nweta ya masiri: ebe a ka abawanye ogo ntutu. Nchọpụta a emeela ka obi sie ndị trichologists ike na ihe ngwọta a abaghị uru nye ndị na-ata ahụhụ site na alopecia.
Minoxidil maka ntutu, n'eziokwu, bụ ihe "nkezi" n'etiti ọgwụ na ịchọ mma. Ọ bụrụ na anyị na-atụle ihe omume na arụmọrụ ya, mgbe ahụ, anyị nwere ike ikwubi na nke a bụ ọgwụ, ma e wezụga na a na-enye ya na ụlọ ọgwụ na-enweghị ọgwụ. N'otu oge ahụ, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-ewere Minoxidil dịka ihe ịchọ mma nke nkịtị, ma na-enwe mmetụta dị ike karị.
Ọ bụ ihe ngwọta na-enweghị ntụpọ nke na-enweghị mmetụta dị egwu. Ngwaọrụ a nwere ihe ndị a:
minoxidil - isi ihe na-arụ ọrụ;
ethanol - ihe mgbaze, nke na-akwalitekwa ngwa ngwa ịsacha ihe ngwọta n'elu akpụkpọ ahụ;
propileglycol - ihe nke na-eme ka ntinye nke akụkụ ahụ na-arụ ọrụ na-eme ka ọkpụkpụ dị mkpa nke epidermis;
mmiri (eji emepụta otu ihe ngwọta);
oxides nke nitrogen na zinc, tinyere ihe ndị ọzọ inyeaka.
Minoxidil - mmetụta nke ọgwụ ahụ
Isi na-arụsi ọrụ ike na-emetụta ọkwa larịị. Ọ na-eme ka ọkpụkpụ na-emegharị ahụ ma na-agbanwe ihe ọdịdị nke ntutu. N'ihi ngwa ngwa nke ọbara na-asọba na usoro mgbọrọgwụ, a na-enyefe nri dị ukwuu. Ọ bụrụ na, n'oge mmekọrịta ya na ọgwụ ọjọọ, ntutu ntutu isi na-ezu ike, mgbe ahụ, ha na-aga na-arụsi ọrụ ike. Iji kpee ikpe maka Minoxidil maka ntutu maka ụmụ nwanyị dị irè, ọ ga-ekwe omume nanị mgbe ọnwa 3-4 gasịrị site na mmalite ọgwụgwọ. Emere ngosi kachasị anya dị ka otu afọ site ugbu a.
Ọ bụghị ikpe nile nke iji ọgwụ ọjọọ eme ihe n'otu mmetụta ahụ. Na ụfọdụ ndị ọrịa, dị ka nyocha, ọ bụ naanị ìhè ọkụ na-egosi. Ọnọdụ a na-emekarị ka ndị na-ahụ nkedo na-agafe ogologo oge. Ọ bụrụ na alopecia tara ahụhụ n'oge na-adịbeghị anya, ọgwụ a ga-edozi nsogbu a kpamkpam. Na mgbakwunye, dị ka ọnụ ọgụgụ, na ụmụ nwanyị, iji ngwá ọrụ a enye ihe ka mma karịa ụmụ nwoke.
Minoxidil - ịta
A na - emepụta ya site na ngwa ngwa dị iche iche nke isi ihe na - arụ ọrụ. Minoxidil maka ntutu nwere ike ịbụ dị ka ndị a:
2% - maka nwanyi;
5% - eji na alopecia nwoke;
10% - na-enye aka maka nnukwu ntutu isi na ndị nnọchiteanya nke mmekọahụ siri ike karị;
15% - na - eji ego eji ego a eme ihe dị oke obere.
Nkwadebe na-adabere na Minoxidil maka ntutu
N'ime ha, ihe a na-arụsi ọrụ ike dị iche iche. Minoxidil ọgwụ dị otú ahụ:
Spoo na Minoxidil maka ntutu
A na-atụ aro ka ị jiri ya mee ihe mgbe a kwụsịchara usoro ọgwụgwọ ahụ. Iji ngwá ọrụ dị otú ahụ na-enye ohere iji meziwanye ihe mepụtara. Minoxidil maka ụmụ nwanyị nọ na shampoos nọ n'ọnọdụ dị ala. Maka nke a, ọ bụrụ na eji naanị gị n'ụlọnga ahụ, ekwupụtaghị ya. Tụkwasị na nke ahụ, a na-ewepụ ihe ndị na-arụsi ọrụ ike mgbe a na-asacha nchachasị ya.
Nweta ngwaahịa ndị nwere ihe ntutu isi Minoxidil, akara ngosi ndị na-esonụ:
Eliokap Top Top Hair Back;
Na-eji Minoxidil eme ihe maka ntutu
A na-emepụta ihe ịchọ mma nke a site na ntinye nke ihe dị na 2% na 5%. Ihe ndị dị otú a bụ site Alerana, RegenePure, MinoX 2 na ụdị ndị ọzọ. Minoxidil ịgba nwere ọtụtụ uru:
mfe nke iji;
ndi mmadu (ndi nwoke na ndi nwanyi)
nwere ike tinye ya n'ọrụ na obere oge.
Minoxidil - ude mmiri ntutu
Iche nke isi ihe na-arụsi ọrụ ike n'ime ihe ịchọ mma dị otú ahụ nwere ike ịdị iche site na 1% na 5%. Lotions nwere ikike dị ala nke akụrụngwa na-arụ ọrụ na-egosi ịdị irè dị ukwuu na alopecia nwanyi. A na - atụ aro iji ntinye elu nke minoxidil na - atụ aro maka ndị ikom na - ata ahụhụ site na alopecia. Ejiri otu karama maka usoro ọgwụgwọ kwa ọnwa. Ụzọ dị otú a maka oke ntutu Minoxidil dị na ụdị ndị a:
Equate na ndị ọzọ.
Minoxidil maka ngwa ntutu
A na-eji ọgwụ a eme ihe na alopecia. Tụkwasị na nke ahụ, a na-eji Minoxidil mee ihe n'ọnọdụ ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, ọ bụ maka:
enweghi ntutu isi kpatara nsogbu nke ebufe;
ebe nlebara anya;
wepụ ntutu isi;
ọ dị mkpa ka ịbawanye ọsọ nke ntutu isi;
alopecia kpatara ọdịda hormonal .
Ọ bụrụ na ọ na-eme ka isi ncha site na ịṅụ ọgwụ ụfọdụ, site na nri siri ike ma ọ bụ site na chemotherapy, mgbe ahụ, usoro ngwọta a enweghị ike. Ọ pụghị imetụta oké ntutu isi. Tụkwasị na nke ahụ, e nwere ọgwụ ọgwụgwọ na ọgwụ ndị a na-eme iji mee ihe. A naghị akwado minoxidil maka ntutu isi maka iji ya mee ihe dị otú ahụ:
ime ime (gụnyere otu ọnwa tupu e chee na a tụrụ ya anya);
oge ịkọ oge;
afọ iri na asatọ;
mgbe ọ na-afụ ụfụ na akụkụ nke ọgwụgwọ ahụ;
ọ bụrụ na akpụkpọ ahụ dị n'isi (mebiri, ọkụ, scaly, na ihe ndị ọzọ).
Ọ bụrụ na a chọrọ Minoxidil, ụzọ ngwa maka ntutu isi nwere ike ịdị iche iche na-adabere n'ụdị nke eji eme ihe a. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ịkwado ndụmọdụ ndụmọdụ trichologist. Nke a na - emetụta ugboro ole ị na - eji ọgwụ ọjọọ eme ihe: adịghị etinye ọgwụ ahụ ugboro ugboro karịa ka akwadoro ya. Tụkwasị na nke ahụ, a na-amachibido ya na ebe ọzọ akpụkpọ anụ dị iche iche karịa isi.
Minoxidil site na ntutu isi
Iji chebe onwe gị pụọ na nsonaazụ ọjọọ, ọ dị mkpa idobe iwu nke ngwa nke ngwá ọrụ a. Minoxidil megide ntutu isi bụ dị ka ndị a:
Akpụkpọ ụkwụ ahụ kwesịrị ịbụ akọrọ.
Mgbe a malitere ụdị alopecia, a ghaghị iji ọgwụ ahụ mee ihe n'ebe okpukpu abụọ kwa ụbọchị (na ụtụtụ na tupu oge ihi ụra). Ọ bụrụ na enwere ntutu isi, ọnụ ọgụgụ nke usoro nwere ike belata na otu kwa ụbọchị (mgbede).
Otu otu dose bụ 1 ml, ihe kachasị kwa ụbọchị bụ 2 ml. Ka e wee ghara ihie ụzọ site na nhazi ahụ, ndị na-emepụta ihe na-etinye karama ahụ na nkwadebe ya na pipette dị mma.
Mgbe itinyechara ngwaahịa ahụ, ịkwesịrị ịhịacha ya na ntanye aka na ntutu. Oge akwadoro nke usoro dị otú a bụ ọkara nkeji.
N'ime awa anọ na-esonụ mgbe usoro ahụ gasịrị, ị gaghị asacha isi gị!
Minoxidil maka ntutu isi
Nri a bụ maka iji mpụga nkịtị! Maka ibu ntutu, a na-eji ya eme ihe n'otu ụzọ ahụ dị ka nke alopecia. Na mbido, ihe ọ na-arụ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịhụ ya anya. Isi ntutu isi na-egosi naanị ọnwa 3 mgbe mmalite nke iji ọgwụgwọ a. Ndị ọkachamara anaghị atụ aro ịkwụsị ọgwụ n'oge a. Ọ dị mkpa ma nọgide na-anọgide na-eji Minoxidil maka ntutu isi. Ka oge na-aga, a na-eji nnukwu "mkpara" edozi ntụ ahụ.
Enwere ike iji minoxidil maka ntutu isi ọ bụghị naanị dị ka ngwọta ma ọ bụ mmiri mmiri. A pụkwara itinye ya n'ọrụ n'ụdị ịgba. N'okwu a, otu usoro ọgwụgwọ dị otu maka nkwadebe mmiri. Ọ bụ 1 ml, nke kwekọrọ na 7 nrụgide na valvụ. A pụrụ iji ụfụfụ mee ihe maka ntutu isi. Otu onu ogugu abuo bu - onu ogugu. A ga-ekpufụ ụfụfụ a na-esi na ya pụta ma jiri nwayọọ mee ya.
Minoxidil - analogues
Ngwọta a nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịkwadebe na Minoxidil maka ntutu adịghị anabata (dịka ọmụmaatụ, n'ihi allergies na isi ihe dị na ya), enwere ike ịhazi ihe ndị ọzọ na-esonụ:
Spectral DNS, nke nwere nanoxidil;
Vichy Dercos, ebe aminexil dị;
Alerana , ihe kachasi ike nke bu pinacidil;
Dercos Neogens na-adabere na stemoxidine.
A na-emepụta Minoxidil dịka analogụ maka ntutu isi iji merie alopecia. Ionophoresis ma ọ bụ onye na-achọpụta ihe ga-enyere aka mee ka ọrụ dị otú ahụ dịkwuo ukwuu. A ghaghị iduzi ihe niile dị otú a n'okpuru nlekọta nke ndị trichologist. Enwekwu nkwalite nke ọgwụ ọjọọ dị ize ndụ. Ọ nwere ike iduga na ọdịdị nfụkasị na omume nke mmetụta ndị ọzọ.
Bee butter maka ntutu
Na-ezigara ndị na-agba nri
EYE MASK IHE HAIR
Mbadamba nkume maka ntutu isi
Nkpu maka ntutu na nkochi ime akwa
Shampoo maka ntutu ntutu - nyocha nke kacha mma
Bradley Cooper na Irina Sheik nwere ike ịchọrọ
Gịnị mere ha ji emechi anya ha mgbe ha susuru ọnụ?
Ịdị na uwe
Nri si na imeju
Kedu ọka bụ calorie kachasị dị ala?
Olee otú iji kwadebe ndị ezigbo mmadụ?
Ezigbo ụtọ dhänsäk na shrimps
Fibrogastroscopy nke afo
Canapé na skewers - Ezi ntụziaka
Mgbu na nkwonkwo ikpere - akpata
Uru nke ise siga
Kedu otu esi ahọrọ pantyhose maka uwe?
Kedu ka esi eme ka hemoglobin dị n'ụlọ?
Nri maka cutlets
Sandwiches na caviar uhie
Mgwakota agwa maka Mayonezi